Matipi ekuchengetedza ekushandisa mabhasikoro emagetsi
musha Blog Matipi ekuchengetedza ekushandisa mabhasikoro emagetsi
Zuva ： 2021-08-02 Zvikamu:Blog Views: 1,484 maonero
1. Pakutenga motokari mabhasikoro, isu tinofanirwa kutarisa chitarisiko, zvikamu, mabhureki, kubatana uye nezvimwe zvinhu zvemota yemagetsi. Sarudza bhasikoro remagetsi rinoenderana newe uye riite zvirinani kuchengetedzwa. Pano, tinokurudzira mabhasikoro edu emagetsi, ayo anodhura uye ane simba rekufamba. Mushure mekutenga mota, unofanirwa kuchengetedza mota yako nemazvo, kugara uchitarisa mabhureki, magirazi ekuona kumashure, matai, mabhatiri, nemwenje, nezvimwe, uye kugadzirisa uye kugadzirisa matambudziko munguva.
2. Mabhasikoro emagetsi zvakasiyana nebhasikoro. Hazvirevi kuti unogona kuchovha mabhasikoro emagetsi kana uchikwanisa kuchovha bhasikoro. Tora nguva yako, vashandisi venguva yekutanga vanofanirwa kudzora, gadziridza giya kune yepasi, dzora kumhanya, chinja zvishoma nezvishoma, usakwira zvakanyanya, kuitira kudzivirira kukuvara kunokonzerwa netsaona dzemumigwagwa.
3. Vazhinji mabhasikoro emagetsi tsaona dzinokonzerwa nekusatevedza mitemo yemumigwagwa. Ive neshuwa yekuteerera mitemo yemumigwagwa, usamhanyisa mwenje mutsvuku, usatora mota, ona marobhoti zvakajeka, usapindire mota dzinoenda dzakananga kana kutendeuka, usayambuke mugwagwa, ona girazi rakachinjika uye kufambisa mota kumativi ese emugwagwa usati watendeuka, wobva wadzikira. Mutsara.
4. Zhizha rasvika, uye vanhu vazhinji vanofarira kuunganidza amburera pachivande. Nekudaro, parasols haingodzivise nyore nyore mutsetse wekuona, asi zvakare inounza njodzi dzekuchengetedza ivo pachavo nevamwe. Kunyanya kana kune mhepo uye kuchinaya, zvinonetsa kudzikamisa mwero wemota, uye zvinowanzo kukonzera njodzi dzemumigwagwa. Kuti uchengeteke iwe nevamwe, ndapota usaunganidze amburera pachivande, uye uve wakachengeteka iwe neni.
5. Zvinokurudzirwa kuti usatasve padivi nedivi munzira imwechete paunenge uchikwira shamwari. Kutanga, ichavhara mugwagwa uye kudzivirira vamwe kupfuura. Chechipiri, vazhinji mabhasikoro emagetsi zvinorema uye zvakaoma kudzora mafambiro. Kana chinhambwe pakati pezviviri chiri padyo zvakanyanya, zvinogona kukonzera nzvimbo yegiravhiti. Kusadzikama uye kuri nyore kudonha. Paunenge uchichovha bhasikoro remagetsi pamazuva ekunaya, teerera zvakanyanya kuchengetedzeka. Nzira yemugwagwa yakanyorova uye inotsvedza, kana mvura yemvura ichidonhera parutivi pemugwagwa kana kumhanya kwemotokari kuchimhanya kunogona kukanganisa mutsetse wekuona uye kukonzera tsaona.
6. Usatambe nenharembozha yako kana uchichovha bhasikoro, uye unofanira kubatidza mwenje weusiku kana uchichovha motokari mabhasikoro husiku, zvikasadaro zvinonetsa kuti vatyairi vemota vazvione, saka zviri nyore kubatwa nemotokari. Ive neshuwa yekukwira zvishoma nezvishoma usiku uye teerera kune traffic.
Kana iwe uchifarira zvigadzirwa zvedu, unogona kupinda pawebhusaiti yedu yepamutemo kuti udzidze zvimwe zvigadzirwa, ndapota inzwa wakasununguka kutibata nesu kana paine chero mubvunzo, isu tiri kutarisira kusvika kwako. www.zhsydz.com
Prev: Kupeta ebikes: wedzera zvishoma kurerukirwa kune hwako hwakabatikana hupenyu
Next: Iyo Yakanakisa E-Bike Shanduko Kits: Ita yako bhasikoro ive yakakwana.
Pfungwa huru dzekuchengetwa kwemazuva ese emabhasikoro emagetsi
Magetsi Mabhasikoro Anopfupisa Kutenderera Nguva NaNana Nguva
36V350W bhasikoro rinokwana mabhasikoro A6AH26
kaviri motokari uye bheteri mabhasikoro evanhu vakuru A6AH26
48V500W magetsi mabhasikoro a6AH26F
36V10AH rakanaka guta regesi mabhasikoro A3AL24
chakavanzika bhati pakati pemotokari mabhasiki marefu speed 25-30KM / H A5AH26MD